मडुरोसँग भेनेजुयलामा हात मिलाएर फर्किएका... :: मनोज सत्याल :: Setopati
मडुरोसँग भेनेजुयलामा हात मिलाएर फर्किएका सांसद भन्छन्- डावोसमा प्रधानमन्त्री ओली र काठमाडौंमा प्रचण्डले पुँजीवादीविरूद्ध हुँकार गर्नुभयो
मनोज सत्याल काठमाडौं, माघ १८
राष्ट्रिय सभा सदस्य बलराम बाँस्कोटा। फाइल तस्बिर।
सात समुद्रपारिको दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुयलासँग नेपालको ‘गोरु बेचेको साइनो’ पनि छैन। राज्यस्तरमा कुनै साइनो नभए पनि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एक सांसद भने केही साताअघि राजधानी काराकासबाट निम्तो आयो- नवनिर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मडुरोको सपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित हुने। दुई साताअघि उनी भेनेजुयला गए साता दिन बसेर फर्किए।
विश्वका बिरलै मुलुक होलान्, जसले नेपाली नेताहरूलाई आफ्नो राष्ट्रपतिको सपथग्रहणमा निम्तो पठाउँछन्।
मडुरोको सपथमा बोलाइने ती सांसद हुन्- नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् राष्ट्रिय सभा सांसद, बलराम बाँस्कोटा।
जनवरी १० मा मडुरोको सपथ ग्रहण थियो। सोही समारोहका लागि बाँस्कोटा ७ तारिखमा नेपालबाट टर्की उडे। टर्कीबाट क्युबा। अनि बल्ल त्यहाँबाट भेनेजुयलाको राजधानी काराकास उत्रिए।
बाँस्कोटाको यो पहिलो भेनेजुएला यात्रा भने थिएन। उनी सन् २०१७ र २०१८ मा पनि भेनेजुयला पुगेका थिए। अर्थात पछिल्ला तीन वर्षमा उनले भेनेजुयला भ्रमणको ‘ह्याट्रिक’ मारेका छन्।
तत्कालीन नेकपा एमालेको जनवर्गीय संगठन किसान संघको नेताको हैसियतले उनले दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूको धेरै पटक भ्रमण गरेका छन्। एमालेको किसान संघको ल्याटिन अमेरिकी मुलुकका वामपन्थी दलसँग राम्रो सम्बन्ध छ।
त्यही सम्बन्धका कारण बाँस्कोटा ल्याटिन अमेरिका गइरहन्छन्। भेनेजुयला र अन्य देशमा समेत उनीहरूसँग भेटघाट हुन थालेपछि बाँस्कोटाले भेनेजुयलाका नेताहरूलाई साथी बनाए।
त्यसपछि त भेनेजुयला उनका लागि पानीपँधेरो भयो।
बुधबार बाँस्कोटा आफ्नो भेनेजुयला यात्राबारे सेतोपाटीसँग कुरा गर्न तयार भए।
‘म किसान संघको नेता हो। लाभिया क्याम्पेसना किसानहरूको अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क छ। त्यसमा हामी ल्याटिन अमेरिकाका देशसँग सहकार्य गर्छौं,’ बाँस्कोटाले भने, ‘त्यसको बैठकको तयारीका लागि साथै सपथ ग्रहणका लागि पनि म यसपालि भेनेजुयला पुगेको हुँ।’
अहिले भेनेजुयलामा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल छ, भैरहेको के हो?
‘यो तेलको राजनीति हो’, बाँस्कोटाले भेनेजुयलाको जटिल राजनीतिलाई सरल तरिकाले भने, ‘भेनेजुयलालाई पेट्रोलियम पदार्थ वरदान र श्राप भयो। वरदान यसकारण कि उनीहरू स्रोतले सम्पन्न छन्। तर विश्व शक्ति राष्ट्रहरू र पुँजीवादी र साम्राज्यवादी राष्ट्रको ध्यान केन्द्रीत भयो। जसले राजनीतिक खिचातानी सिर्जना गर्‍यो।’
उनले पछिलो राजनीतिक घटनाक्रमलाई बुझाउन खोजे- ह्युगो चाभेजको क्यान्सरबाट निधन भएपछि मडुरोले एक वर्ष कार्यवाहक चलाए। त्यसपछि भएको निर्वाचनमा बहुमत ल्याए। राष्ट्रपति जिते पनि संसदको चुनावमा उनको पार्टी युनाइडेट सोसलिस्ट पार्टी अफ भेनेजुएलाको बहुमत आएन। हाल अमेरिकाले राष्ट्रपति घोषणा गरेको जुवान गुआइदोको पार्टी भोलुन्टेड पपुलरले जित हात पार्‍यो। राजनीतिमा डेडलक सिर्जना भयो।’
त्यसो त बाँस्कोटालाई चाभेजको मृत्यु पनि शंकास्पद लाग्छ।
‘चाभेजको मृत्यु क्यान्सरका कारण भयो। तर भेनेजुयलामा चाभेजको क्यान्सर पनि शंकाको दृष्टिले हेरिन्छ। त्यहीबेला इक्वेडरका राष्ट्रपतिलगायत ल्याटिन अमेरिकाका धेरै राष्ट्रप्रमुखमा क्यान्सर भयो। कसरी क्यान्सर भयो? जसरी मदन भण्डारीको हत्या रहस्यमय भयो त्यसैगरि ह्युगोको क्यान्सर रहस्यात्मक रह्यो,’ उनले भने।
बाँस्कोटा भेनेजुयलाबाट फर्किएलगत्तै प्रतिपक्षी नेता गुआइदोले आफूलाई सडकबाटै राष्ट्रपति घोषणा गरेका छन्। अमेरिकालगायत भेनेजुयलाका छिमेकी मुलुकहरूले पनि गुआइदोलाई समर्थन गरेका छन्। कोलम्बिया, ब्राजिल, चिली र पेरूको समर्थन गुआइदोलाई छ।
तर बाँस्कोटा ती देशहरुको समर्थनको अर्थ नरहेको तर्क गर्छन्।
‘ती अमेरिकी पपेट गभर्मेन्ट हुन्’, बाँस्कोटाले भने, ‘तेलको खानी भेनेजुयलामा छ। तर तेलको प्रशोधन अमेरिकामा हुन्छ। अमेरिकाले प्रशोधित तेलको अभाव सिर्जना गरेर मडुरोविरूद्ध दबाब छ दिएको छ। पैसा रोकेको छ।’
बाँस्कोटाले त्यहाँको जनताको समर्थन मडुरोलाई रहेको दाबी गरे।
‘जनताको समर्थन मडुरोलाई छ। अर्कोतर्फ सेनाको समर्थन छ। चीन र रूसजस्ता देशहरूले पनि भनेजुयलाको विषयलाई आन्तरिक मामिला भएकाले हस्तक्षेप नगर भनेका छन्। राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदबाट अमेरिका अगाडि बढ्न सकेको छैन।’
बाँस्कोटाले भेनेजुयलामा राष्ट्रपति मडुरोलाई सपथ ग्रहणमा भेटे। हात मिलाए र बधाई दिए। तर कुरा गर्ने अवसर भने पाएनन्।
‘उपराष्ट्रपति, परराष्ट्र मन्त्री र शिक्षा मन्त्रीसँग कुराकानी भयो’, बाँस्कोटाले भने, ‘जसरी यहाँका मन्त्री साथी हुन्छन्। त्यस्तै साथी भएकाले भेटवार्ता भए।’
आफ्नो यात्रा र भेनेजुयलाबारे बताइरहेका बाँस्कोटालाई मैले नेपालतिर फर्काएँ।
‘तपाईं पार्टीको सहमति लिएर जानु भएको हो?’
बाँस्कोटाले भने- हो। म पार्टीसँग अनुमति लिएर गएको हो। मदुरोलाई हाम्रो समर्थन छ। र त हाम्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वक्तव्य आयो।’
बाँस्कोटा आफैंले वक्तव्यको प्रसंग निकालेपछि मैले सोधें-वक्तव्य निकाल्न तपाईंले नै लगाउनु भयो भन्ने छ नि?
‘वक्तव्यमा मेरो पहल होइन। पार्टीका नेताहरू बसेर निकाल्नु भएको हो। तर वक्तव्यको सारसँग मेरो समर्थन छ। हाम्रो सरकारले निकालेको वक्तव्य र प्रचण्डको वक्तव्यको सार मिल्छ। प्रचण्डको वक्तव्य राजनीतिक हो। नेपाल सरकारको वक्तव्य कूटनीतिक हो।’
प्रचण्डले वक्तव्य निकाल्दा आफूसँग कुनै छलफल नभएको बाँस्कोटाको दाबी छ।
‘म केन्द्रीय सदस्य मात्र हो। प्रचण्ड मेरो पनि नेता। पार्टीको शीर्ष व्यक्तित्व। हामी कोही पनि केटाकेटी छैन। उहाँको पृष्ठभूमि माओवादी, मेरो एमाले। अनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको जानकारीबिना नै उहाँले विज्ञप्ति निकाल्नु भएको होइन,’ उनले भने।
बाँस्कोटाले नेकपाको सम्बन्ध भेनेजुयलासँग विस्तार भैरहेको तर्क गरे।
‘पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले घानामा भेनेजुयलाका कमरेडहरूसँग छलफल गर्नुभयो’, बाँस्कोटाले भने, ‘मदन भण्डारी एसियाली स्कुलको सम्बन्ध अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका पार्टीहरूको यस्तै स्कुलहरूसँग छ। हामीबीच समन्वय छ। एक अर्का देशबारे पढ्ने, बुझ्ने चलन छ।’
भेनेजुयलाको विषयमा नेकपाको विज्ञप्तिमा अमेरिकी चासो अनुचित भएको उनको तर्क छ।
‘हाम्रो पार्टीले आफ्नो धारणा राख्दा अमेरिकाको राजदूतले स्पष्टिकरण माग्नुपर्ने अवस्था होइन। पार्टी र दूतावासबीच केही सम्बन्ध छैन। यदि स्पष्टिकरण मागेको हो भने अमेरिकी राजदूतले आफ्नो दायरा नाघेका छन्। तर हामीलाई स्पष्टिकरण मागेकोबारे थाहा छैन। पत्रपत्रिकामा आएका छन्। आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्नेले कुनै पार्टीले वक्तव्य निकाल्दैमा सरकारसँग सोध्दैन।’
बेला न कुबेला भेनेजुयला
उनले सत्तारूढ दल भए पनि सरकारसँग स्पष्टिकरण सोध्नु उचित नभएको बताए।
‘सरकारलाई सोध्ने होइन। पार्टीलाइ सोध्ने कुनै आधार छैन? अमेरिकासँग सरकारको सम्बन्ध छ। पार्टीको सम्बन्ध त छैन,’ उनले भने।
मडुरोको सपथको निम्तोकार्ड। तस्बिर : बाँस्कोटाको फेसबुक
नेपालले दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको दोस्रो मुलक हो, अमेरिका। दशकौंदेखि अमेरिका नेपाली विकासमा सहयोग गरिरहेको छ। केही समयअघिमात्र मिलिनयम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत नेपालको विकासमा ५० अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने अमेरिकाको घोषणा छ।
कूटनीतिज्ञहरूले विश्व शक्ति राष्ट्र र नेपालको पूरानो मित्र अमेरिकासँग गोरू बेचेको साइनो नभएको मुलुकका लागि निहुँ खोज्न नहुने धारणा राखेका छन्। बाँस्कोटा त्यस्तो धारणालाई ‘निम्न पुँजीवादि चिन्तन’ भन्छन्।
‘अहिले संसारको दादागिरी/मुखियागिरी अमेरिकाले गरेको छ। त्यो दादागिरीविरूद्ध नबोल्ने हो भने हामी कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य कसरी हुन सक्छौं’, बाँस्कोटाले भने, ‘अमेरिकाको सहयोग भने पनि इयूको सहयोग भने पनि त्यो स्वार्थपरक हुन्छ। अनुदान ९० प्रतिशत फर्कन्छ। १० प्रतिशत प्रयोग हुने हो। यसमा भ्रममा पर्नुहुन्न। अमेरिकाले ठूलो धनराशी हामीलाई सहयोग गर्‍यो त्यसैले विरोध गर्नुहुन्न भन्नु दास मानसिकता हो। उसले सहयोग गरेको हुनाले विरोध गर्न हुन्न भन्ने निम्न पुँजीवादी चिन्तन हो। त्यसबाट ग्रसितहरूबाट यस्तो टिप्पणी आउनु स्वभाविक हो। आमपार्टी पंक्तिबाट विरोध आएको छैन।’
उनले पछिल्लो पटक नेकपाले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा राम्रो गरिरहेको र पुँजीपतिहरूलाई चुनौती दिरहेको तर्क गरे।
‘पुँजीपतिहरूको क्लब भनिने विश्व आर्थिक मञ्चमा सहभागी भएर डावोसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हुँकार गर्नुभयो। हस्तक्षेपकारी शैलीमा भनाइ राखेर आउनुभयो। त्यो सह्रनीय छ। त्यो पुँजीवादी क्याम्प भित्रको हस्तक्षेप हो। डावोसमा एकजनाले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ हाम्रो एक नम्बरको शत्रु भनेर पनि बोले। तर हाम्रो प्रधान्मन्त्रीले पुँजीवादीहरूको गढमा कुरा राखेर आउनुभयो।’
उनले प्रचण्डको वक्तव्य पनि पुँजीवादीविरूद्ध हस्तक्षेप भएको बताए।
भेनेजुयलामा सांसद बाँस्कोटा। तस्बिर : बाँस्कोटाको फेसबुक
‘अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले वक्तव्य जारी गर्नुभयो। त्यसले पुँजीवादी खेमालाई हुँकार भयो। नत्र किन स्पष्टिकरण सोध्थे? त्यसले उनीहरूको पराजित मानसिकता देखाउँछ,’ बाँस्कोटाले भने, ‘नभए किन कम्युनिष्ट पार्टीले वक्तव्य निकाल्दैमा राजदूतले सरकारको पोजिसन क्लियर गर्न माग गर्नुपर्ने?’
भेनेजुयलाबाट फर्किए पनि बाँस्कोटाले अझै पनि आफू त्यहाँका नेताहरूसँग सम्पर्कमा रहेको बताए।
‘भेनेजुयलाका पार्टीका साथीहरूसँग म निकट सम्बन्धमा छु। त्यहाँको पार्टीले पत्राचार गर्छ। भेनेजुयलाका इस्युमा साम्राज्यवादको हत्कण्डाबारे आवाज उठाउनु मेरो कतर्व्य हो भन्ने लाग्छ।’
उनले मडुरोको पार्टीका नेताहरूले भेनेजुयलामा कुनै समस्या नरहेको जवाफ दिने गरेको बताए।
‘कुरा गर्दा समस्या छैन भन्नुहुन्छ। भेनेजुयलामा दिनहुँ प्रतिपक्षी र सत्तापक्षको जुलुस निस्कन्छ। प्रतिपक्षको भन्दा ठूलो जुलुस सत्तापक्षको छ। तर त्यसलाई मिडियाले दिँदैन। यो तेलको राजनीति हो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। भेनेजुयलाको ५० प्रतिशत तेलको माग अमेरिकाले गर्‍यो। त्यो पूरा नहुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने उनीहरुको भनाइ छ।’
भेनेजुयलाबारे ओलीसँग सल्लाह नै नगरी प्रचण्डको विज्ञप्ति!
भेनेजुयलाबारे बोल्यो नेपाल- कुनै राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप हुनु हुँदैन
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १८, २०७५, १५:३६:००